भ्रम र धेरै शंका गर्ने बानी छ ? मनोरोग लाग्ला है ! – Etajakhabar
भ्रम र धेरै शंका गर्ने बानी छ ? मनोरोग लाग्ला है !
चितवन दिव्यनगरकी ४५ वर्षीया एक महिलाको आँगनमा चिप्लिएर हात भाँचियो । त्यसपछि उनले झारफुक गरेर झाँक्रीले भनेको पत्याएर जडीबुटीका लहराले बाँधेर राखिन् । त्यसपछि उनले नमस्कार गर्दा हात लुकाउने, पछौराले छोप्ने, कुनै कार्यक्रम गर्दा नजाने गर्न थालिन् । एकाएक उनको जीवनमा परिवर्तन आयो । पहिले हँसिली ती महिला पछि बोल्नै छाडिन् । एक त आर्थिक अवस्था कमजोर अर्काे भाँचिएको हातमा लहरा बाँधेकाले जिस्काउला भन्ने डर उनमा पैदा भयो ।
त्यसैले लुकेर हिँड्न थालिन्, स्थानीय मनोविमर्शकर्ता आरती विकले भन्नु भयो, “हाम्रो त वरिपरि नै पर्न छाडिन् ।” यो कुरा आरतीले गाउँमा बनेको मनोसामाजिक सहयोग समितिमा राखिन् । समूहमा सिकेको कुरा लागू गर्न केही महिला तम्सिए । बाटो काट्ने बेलामा उनको घरमा पस्ने नबोले पनि बोलाउने गर्नुपर्छ भनेर केही महिला कस्सिए । त्यो क्रम केही दिन चल्यो । बिस्तारै गाउँलेले उनलाई नजिक बनाए । त्यसपछि उनी खुल्न थालिन् । हात देखाउने भइन् । “हात लामो समय सफा नगर्दा मयलले भरिएको र हात नै बाँगोजस्तो भइरहेको रहेछ”, मनोसामाजिक परामर्शदाता राधा अर्यालले भन्नु भयो ।
उनलाई हामीले नै पैसा उठाएर उपचार गरायौँ । अहिले उनको जीवन पुनः पुरानै अवस्थामा आएको छ । “त्यो दिदीलाई देख्दा मनमा शान्ति पाएपछि त्यसै चमक देखिँदो रहेछ भन्ने लाग्छ”, आरतीले भन्नु भयो । गाउँकै ६५ वर्षीया वृद्धले श्रीमती कोहीसँग बोल्दा पनि झगडा हुने अवस्था आयो । अर्कैसँग लागि भनेर रिस गर्न थाले । श्रीमानले हेराउन जाँदा झाँक्रीले फुकेको सुपारी खुवाउन सल्लाह दिएछन् । तर नमान्दा परिवारमा कलह बढ्यो । श्रीमानकै भनाइअनुसार फुकेको सुपारी दिन मनोविमर्शकर्ता तयार भए । “तर त्यो सुपारीमा कुनै विषादी पनि हुन सक्छ भनेर हामीले सुपारी परिवर्तन गरेर खान दियौँ त्यसपछि सबै समस्या हल भयो,” आरतीले भन्नु भयो । उनको मनको सन्तोषका लागि सुपारी दिनुपरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
यसरी गाउँमा आठ वटा समूहका १८० जना स्थानीयवासीलाई मनोविमर्श सेवा दिइएको थियो । त्यसमध्ये ११ जनामा समस्या देखिएको मनोविमर्शकर्ता राधा अर्यालले बताउनुभयो । सात जनाको गाउँमा मनोसामाजिक सहयोग समितिमार्फत समस्या समाधान भयो । अन्य चार जनालाई अलि गम्भीर भएकाले उपचारका लागि सिफारिस गरिएको स्थानीयवासी टीकाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो । टिपिओ नेपालले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा गाउँमा गम्भीर मनोरोगीको उपचार गर्ने र सेवा दिने गर्दै आएको छ । अन्य सामान्य मनोरोग गाउँलेले नै समाधान गर्ने गरेका छन् ।
अहिले झगडा प¥यो भने गाउँले चौकी जाँदैनन् , पहिले समितिमा आउँछन् । स्थानीयवासी टीकाप्रसाद अधिकारी मानिसमा उब्जने भ्रमले मनोसामाजिक समस्या हुने बताउनु हुन्छ । बेलामै यस्ता विषयमा ध्यान दिए मनोरोग नलाग्ने चिकित्सकले बताएका छन् । रासस
Posted on: Sunday, April 24, 2016 Time: 8:19:40
‘कमेडी च्याम्पियन’ को ग्राण्ड फिनाले भब्य हुने, चैत १ गते कहाँ हुँदैछ फिनाले ?
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सा अंकित केक काटेपछि कलाकारहरुले लेख्ये यस्तो स्टाटस्
दिल्ली प्र’द’र्शनमा खुलेआम प्रहरी माथि सात राउण्ड गो’ली चलाउने शाहरुख प’क्रा’उ
‘सरकारी सम्पत्ती दुरुपयोग भयो’ भनेर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मेयरले दिए धन्यवाद, ‘अब गल्ती गर्दिन’ भन्दै गरे बाचा
संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न, वर्थ डे केकमा नेपालको नक्सा का’टेर किन खाएको ?
रवीन्द्रलाई गुमाएको एक वर्ष पोखराले यसरी सम्झियो उनलाई
रविन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टरमा देखिए त्रुटी नै त्रुटी, छानविन समितिले भन्यो यसकारण भयो दु’र्घ’टना
सडकबाट उद्धार गरि आश्रममा पुर्याइएका ७ जनाको निधन
दुई महिने छोरोलाई कलेजो दिन चेन्नई पुगेका बाबुको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
-13050 second ago
चितवन अदालतमा न्याय खोज्दै पुगे ज्ञानेन्द्र शाही, के हुँदै छ मु द्दा (भिडियो हेर्नुस)
-12198 second ago
दोहोरी गाएर भाइरल बालचन्द्रको इन्द्रेणीले जुरायो जोडी,बिहेपछि श्रीमान श्रीमती पहिलो पटक मिडियामा
-11635 second ago
पोखराको फेवातालमा हेर्दा हेर्दै डुंगा डुब्यो: एक जना वे’पत्ता, दुई जनाको यसरी भयो उद्दार (भिडियो हेर्नुस्)
-5778 second ago
नायिका प्रियंका कार्कीलाई बिहेको चटारो, प्रियंकासंगै आयुष्मानको हातमा पनि देखियो मेहेन्दी
-3644 second ago
-2606 second ago
कतारले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाइदिने र त्रिभुवन बिमानस्थललाइ स्तरोन्नति गरिदिने
-2119 second ago
-2066 second ago